Samsung waxa uu qabtay shaqo aad u fiican horumarinta qalabka ay sanadihii la soo dhaafay, la xaqiijiyey baahida sii kordhaysa ee qalabka Samsung. Waxaan jeclahay muuqaal u quruxsan cusub ee Gear Galaxy Fit, ATIV Book 9 iyo Galaxy qod6 Edge - waxaan ku faraxsanahay si loo bilaabo caanka ku ah Galaxy 5! Ma aha oo kaliya ayaa sharraxaadda ee ay hindiseen aad ayey usoo wanaagsanaanaysaa miisaaminta hoose oo ay hindiseen ayaa la joogto ah la casriyeeyay oo aan socda dhaqso badan bay ku weligii. Si kastaba ha ahaatee, tan micnaheedu ma aha in qalabka Samsung way ka ammaan galeen khasaare xogta.
Top 3 Samsung Laptop Data Recovery on Windows
Yaa sameeyey? Wondershare
Maxay yihiin qaababka ay muhiimka ah? kara inuu ka soo kabsado 550+ kordhin file, wuxuu taageeraa tiro balaadhan oo ah laptop iyo computer shakhsi magac ka mid yihiin Samsung, awood galabsaday xogta laga badiyay sababta oo ah xaaladaha kala duwan oo ay tahay in la sameeyo iyada oo dhamaystiran ka soo kabsanaya dhaawacyo fudud iyo habka 3-tallaabo fudud. Si aad u ogaatid oo aydan xaraysan aad rabto in aad soo kabsado (oo ma hallayno qoondaynta free of total size data), waxaad ku eegaan karo files si loo ogaado hadii aad rabto ka hor inta gujinaya ah 'Ladnaansho' button.
Halkee ayaan ka heli karaa? www.wondershare.com/data-recovery/
PC3 2. Data Samatabbixinta
Yaa sameeyey? Prosoft Engineering, Inc.
Maxay yihiin qaababka ay muhiimka ah? Leh feature ah disk-imaging in ay awood u samaynta koobi saxda ah ee wadid aad u adag ku jira marxaladaha hore ee burburka farsamo. Waxa ugu fiican ee ku saabsan software waa in sameeysa waa inay awoodaan inay kuu soo diraan CD ah Downlaods haddii laptop Samsung ma awoodo inuu cabbayso ee habka bilowga ah! Sidee buu u weyn yahay?
Halkee ayaan ka heli karaa? www.prosofteng.com/datarescuepc3/datarescuepcdemo/
3. EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition
Yaa sameeyey? EaseUS
Maxay yihiin qaababka ay muhiimka ah? software Wizard ku salaysan - si aad u hanuuntaan doonaa talaabo kasta oo jidka ku xiran tahay nooca kabashada aad rabto in aad. Xataa waxaad soo celin karo files in aad horey u tirtiray! Si ka duwan ugu version free of software kabashada xogta, EaseUS waa mid aad u deeqsi ah la qoondeynta size xogta - 1GB waa qoondaynta ugu weyn ee aan ku arkay ilaa hadda in software ah tijaabo lacag la'aan ah.
Halkee ayaan ka heli karaa? http://www.easeus.com/data-recovery/data-recovery-software/computer-recovery-software.htm
Top 2 Samsung casriga Data Recovery on Mac
1. Wondershare Dr.Fone for Android
Maxay yihiin qaababka ay muhiimka ah? hanaanka soo kabashada 3-tallaabo, taageeraa in ka badan 6000 oo moodal oo casriga ah iyo kiniiniyada (oo ay ku jiraan Samsung) oo awood u leh inay astaysto oo gudbiyo si loo soo celiyo. Inkastoo uu ku dhufto ee kala duwan, software tani waa ay awoodaan in ay fududeeyaan habka dib u soo kabashada si nabad ah oo qaab aan muuqan.
Halkee ayaan ka heli karaa? www.wondershare.com/data-recovery/android-data-recovery.html
2. Tenorshare Android Data Recovery Pro for Mac
Yaa sameeyey? Tenorshare
Maxay yihiin ay feature muhiimka ah? kara inuu ka soo kabsado xogta lumay ka dhow xaalad kasta, dib u soo ceshano kartaa ilaa 8 nooc oo files, taageertaa ugu versions Android iyo qalabka (oo ay ku jiraan Samsung) iyo qabtaan shaqo si deg deg ah. Haddii aadan haysan cable xaq, si aad u Mac ah ku xidhi kartaa telefoonka Samsung via WiFi.
Halkee ayaan ka heli karaa? www.tenorshare.com/products/android-data-recovery-pro-for-mac.html
Waa maxay sababta aad soo dir Your Samsung Phone Si Shop dayactirka?
1. dhigida Naftaada Bare
Ha aad qabto mid ka mid password in aad isticmaasho inta badan ka mid ah xisaab aad? Ma jawaabi ah "HAA"? Markaas waxaa laga yaabaa in aad rabto in loo diro telefoonka Samsung dukaanka dayactirka - gaar ahaan haddii aad ku kaydiso sirta ah meel aad telefoon. Waxaan ma leh in kuwan shaqsiyaadka xirfad waxay rabaan xaasidnimo, laakiin waxaa taasi aad uga ammaan haddii aadan si ay dukaan u samaynta ugu diri telefoonka Samsung.
Haddii khasaaro xogta waxaa sabab u ahaa arrin macquul ah, waa in aad awoodaan inay ka bogsadaan xogta aad naftaada iyadoo la kaashanayo software kala duwan oo noqon. Si kastaba ha ahaatee, haddii ay dhibaatadu tahay farsamo jirto wado kale oo aan lahayn oo ku wareegsan. Isku day inaad delink xisaab-ka telefoonka iyo dib sirta ah ay ku qalab kale ka hor inta diraya waa in la cusboonaysiiyey.
2. Badbaadiyey Phones Samsung gabya
Telefoonada Our u badan tahay waa ka sii qoto dheer inoo badan partners in; waxaan u gee meel kasta oo aan tago iyo iyaga ugu tiirsan u dhinac kasta oo nolosheenna. Dhab ahaantii, waxaan ku kalsoonahay telefoonada naga badan in aynu u isticmaalno in ay dhexdhexaadiyaan dhaqdhaqaaqyadii ugu bangiga our, fariimo u dirtid amorous iyo sawirada in ay naga kuwo kale oo muhiim ah, iyo sidoo kale waraaqaha muhiimka ah si ay mustaqbalkooda naga dukaanka.
Haddii aad qabto xogta dammaanad iyo baraha kale in ay yihiin qarsoodi ah, waxaa laga yaabaa in aan qof ay heli karaan in ay hore ugu fiican. Intaa waxaa dheer, uma malaynayo in lagu cambaareeyay waraaqaha iyo sawiro in aad ka shaqayso wax aad u adag in laga takhaluso mar dambe la helay karaa - waxaa suuragal ah injineerada xirfadlayaasha ah in ay iyaga la ogaado.
3. Data Recovery ma aha raqiis ah oo aan hoos iman damaanad
Waxaa jira waxyaabo badan oo looga baahan yahay inuu ka soo kabsado xogta lumay ama laga telefoonka Samsung. Haddii garaash ah oo aad soo xigtay in ka yar $ 100, iska socon oo aan marnaba ku soo laabtay. Waxba ma ahan wixii uu sababaa dhibaato ah, dukaan dayactir sharci ah sida caadiga ah kaa qaadi doonaa bilowga ah, oo aan celin-day Fee ay ku miisaami karaan haddii ay macquul tahay in la soo celiyo data lumay ama u kharribmay.
Halkan waa dalabkaas la mid ah inta ay guud ahaan ku kici lahaa inuu ka soo kabsado xogta laga telefoonka Samsung:
Ka gaabinta macquul ah
Lacag Isku day: Qiyaastii. $ 100
Lacag Recovery: Inta u dhaxaysa $ 300 iyo $ 600 oo dheeraad ah
Ka gaabinta farsamo
Lacag Isku day: Qiyaastii. $ 480 (iyadoon loo eegayn xaaladda telefoonka Samsung)
Lacag Recovery: Inta u dhaxaysa $ 600 ilaa $1.500 oo dheeraad ah
Fee Recovery ayaa waxaa go'aamin doona adayga ay qaadanayso in dib u soo ceshano iyo soo celinta xogta aad ka xasuusta telefoonka ee. Ha qaadan la ogaado in aad u baahan tahay oo keliya in ay bixiyaan Fee Recovery haddii geeddi-socodka waa guul.
Haddii hore ku heshiiyeen, aad oo kaliya waajib ku ah inay bixiso garaash ku soo xogta aad. Ha la xusuusto in damaanad aad Samsung telefoonka ee la inaysan ansax ahayn doonaa mar garaash ku bilaabataa ka shaqeeyo, gaar ahaan haddii ay tahay guuldaraystay farsamo. Haddaba maxaad bixiyo qof aan samatabbixin waxa aad rabto iyo dib telefoonka khaldan in aan xaq u lahayn in la bedelo?
Sida loo uninstall App ka ah Samsung Phone ama Tablet
Inay ku fiicnaadaan in Spotify Premium Android
Sida loo Bookmarks kaabta on Android Phone si fudud
Top 5 Manager Android Window: Multi-Window waxaa suurtagal ah
> Resource > Android > Top 5 Samsung Data Recovery Software